ZTE Axon 10 Pro: Qeexitaannada, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah | Androidsis
Eder Ferreno | | Mobiles, ZTE
ZTE ma uusan rabin inuu seego daabacaadda 2019 ee MWC ee Barcelona. Munaasabadda, astaanta ayaa nooga tagtay taleefankeeda cusub, Axon 10 Pro. Hore ayaa looga faallooday toddobaadyo ka hor in aaladda waxaa lagu waday in lagu soo bandhigo qaab dhismeedka MWC 2019, wax aakhirkii dhacay. Qalabkani waa mid gaar u ah astaanta, maxaa yeelay wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay ee nooceeda ah ee gaaraya 5G suuqa.
Laga soo bilaabo bilowgii, sumaddu waxay muujisay ujeedkeedu inuu noqdo mid ka mid ah hormuudka 5G. Horeba sanadkii la soo dhaafay waxay ku dhawaaqeen qorshayaashooda si ay u bilaabaan moodello iyada oo taageeradaas suuqa. Ta ugu horreysa ee taleefannadan ayaa ugu dambayn rasmi ah. Sababtoo ah ZTE Axon 10 Pro horeyba wuu noo dhex joogaa. Maxaan ka filan karnaa taleefanka?
Sida dhammaan casriga 5G illaa hadda, marka laga reebo Huawei Mate X, qalabku wuxuu ku yimaadaa Snapdragon 855 sida processor-kaaga. Marka waxaan kaa filan karnaa awood weyn xaga waxqabadka.
1 Qeexitaannada ZTE Axon 10 Pro
Qeexitaannada ZTE Axon 10 Pro
Marka la eego naqshadeynta, sumadda Shiinaha waxaa ka go'an a shaashad leh shaashad leh qaab dhibic biyo ah. Markaa la soco isbeddellada suuqyada ee arrintan la xiriira, tan Axon 10 Pro. Heer farsamo ahaan waa dusha sare ee kala duwanaanta, taas oo sumaddu ku rajo weyn tahay inay dib ugu soo laabato suuqa ka dib dhibaatooyin badan oo ka soo gaadhay 2018 xayiraaddii Mareykanka.
Faahfaahinta farsamada ZTE Axon 10 Pro
Tusaale Axon 10 Pro
Screen AMOLED 6.4 Inch Full HD
Kaamirada gadaal 48 MP + 20 MP (Wide) + sawir x5
Kaamirada hore 24 MP
Xuduudaha kala duwan 5G Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac LTE
Tilmaamo kale Akhristaha sawirka faraha ayaa ku dhexjira shaashadda
Batariga 4.300 mAh oo leh lacag degdeg ah
Axonkan 10 Pro ee sumadda ah ee aan ka helno Qualcomm Snapdragon 855 gudaha. Waxay u adeegsanaysaa modem X24 ah, oo loogu talagalay 4G oo horeyba u yimid asal ahaan. Halka X50 uu ku dhegan yahay guddiga taleefanka, si ay haddaba ugu jirto isku xirnaanta 5G. Qalabka ugu horreeya ee sumadda Shiinaha si loo siiyo taageeradan adeegsadayaasha.
Wixii GPU ah Adreno 640 ayaa lagu doortay qalabka, taas oo u oggolaanaysa awood weyn arrintan. Intaa waxaa dheer in uu leeyahay mishiin sirdoon macmal ah oo ka socda Qualcomm. Waxaa la filayaa in sirdoonka macmalka ah ay sidoo kale joogitaan ku yeelan doonaan kaamirooyinka aaladda, sidaa darteed waxaa lagu sii wanaajin doonaa habkan.
Dareeraha sawirka faraha ayaa lagu dhex daray shaashadda hoosteeda, sida aan ku aragno moodallo badan oo ka tirsan heerka sare ee hadda ku jira Android. Waxay sidoo kale leedahay furitaan wajiga, taas oo ay ugu wacan tahay kamaradda hore ee qalabka. Dhinaca kale, shirkaddu waxay soo bandhigtay qaar ka mid ah shaqooyinka muhiimka ah iyada oo ay ugu wacan tahay joogitaanka Android Pie, sida batteriga casriga ah ama xakamaynta tilmaamaha.
ZTE Axon 10 Pro wuxuu la imanayaa kamarad gadaal seddex laab ah. Noocyo badan oo ka mid ah MWC 2019 ayaa naga tagaya moodello leh kamarad gadaal saddex-laab ah ah, oo ah wax lagu soo celinayo sumadda Shiinaha. Midka ugu weyni waa 48 Xildhibaan, halka aan markaa leenahay 20 MP xagal ballaadhan iyo mid saddexaad oo ah 5x zoom optical ah, oo aan la garanayn xallintiisa xilligan. Intaa waxaa sii dheer, mahadsanid sirdoonka macmalka ah waxaan ku lahaan doonnaa qaab cillado ah, indho indheyn, iyo qabashada dhaqdhaqaaqa kamaradahaas.
Waxaan ka helnaa hal nooc oo ah dhamaadka sare, marka la eego RAM iyo keydinta gudaha. Waqtigaan la joogo, shirkaddu nama siinin taariikh gaar ah oo lagu sii deynayo ZTE Axon 10 Pro. Waxaa la sheegay in laga heli doono Yurub mararka lixda bilood ee sanadka ugu horeeya. Waxay u badan tahay inay imaan doonto Juun, sida moodooyinka kale ee 5G ee la soo bandhigay.
Sidoo kale wax xog ah kama hayno qiimaha waxaad yeelan doontaa calankan cusub markuu imaanayo dukaamada. Waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan ka maqalno wax badan oo ku saabsan arrintan iyo taariikhda la sii deyn doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » ZTE » ZTE Axon 10 Pro: Taleefanka ugu horreeya ee sumadda leh 5G